Mahatratra 160 ka hatramin’ny 170 isa isan-kerinandro araka izany ireo fiangonana tonga manao fangatahana eo anivon’ny prefet-n’Antananarivo ny mba hahafahany miverina misokatra indray. Mahazo fahafahana izy ireny raha manaraka ny fenitra ara-pahasalamana sy io salan’isa miisa 50 isan’efitra io saingy ho an’ireo toerana nahitana trangan’aretina kosa dia tsy manome fahazoan-dalana hisokatra ny prefe raha araka ny fanazavan’ny general de division Ravelonarivo Angelo, omaly. Tsy mandeha ho azy izany fepetra izany hoy izy fa misy fanaraha-maso hatao. Mikasika ireo olona manao fisoratam-panambadiana na mariazy ka manofa efitrano filanonana ary manasa olona mihoatra ny 50 isa aorian’izany dia nomarihiny fa tena ho sahirana raha tratra. Ho fiarovana ny fahasalaman’ny vahoaka Malagasy no antony hoy hatrany ity prefen’Antananarivo ity.